🥇 ▷ Hal-abuurnimo: Saynisyahannadu waxay ogaadeen hanaan cusub oo loogu talo galay biraha ✅
Hal-abuurnimo: Saynisyahannadu waxay ogaadeen hanaan cusub oo loogu talo galay biraha
Koox cilmi-baarayaal ah oo ka socota Jaamacadda Wisconsin, USA, ayaa ogaadey hab cusub oo loo leexiyo biraha – sahamin aan cusboonaysiinayn oo keliya fikradaha gaboobay ee ah sida alaabada birtu ay u egyihiin, laakiin waxay u furaysaa fursadaha kala duwan ee naqshadaynta iyo abuurista agab cusub. adkaysi badan oo waara.
Maanta, inta badan dariiqooyinka loo adeegsado samaynta biraha inay noqdaan kuwa adkaysi badan waxay kuxiran yihiin ka-hortagga ama shaqada qabow ee agabkan, oo wax ka qabata cilladaha yar yar ee qaab dhismeedka loo yaqaan ‘kala-baxyada’ ee hadda jira (sida caadiga ah suaradganized) jiimka bir-ka-qurxinta ah ee sameeya biraha. biraha. Laakiin maaraynta qalalaasahaas ayaa carqalad ku noqonaysa ku dhowaad la’aanta qalabka alaabada.
(Isha: Jir Org / Dhalmo)
Sida laga soo xigtay saynisyahano, awoodda loo leexiyo bir birta waxaa loo yaqaanaa ductility – iyo qaababka aan kor ku soo xusnay waxay xaddidayaan dhaqdhaqaaqa oo ka dhigaya agabkan mid aan yarayn. Dhibaatada ayaa ah in luminta dabacsanaan, macdanta birta ayaa sidoo kale u nugul jabka marka cadaadiska lagu hayo.
Si kastaba ha noqotee, cilmi baadhayaashu waxay heleen aluminiin isku-dhafan oo isku-dhafan – oo ka kooban samarium-cobalt – taasi waa laabi karaa xitaa marka go’doominta aysan jirin. Gaar ahaan, saynisyahannadu waxay arkeen in, markay foorarayaan qalab-gacmeedka, xargaha dhuuban ay ka muuqdaan birta kristanka, oo ay ku dhex jiraan moleekuleyaashu ay qaataan qaabeynta amorphous, oo ka duwan qaab-dhismeedka caadiga ah ee abaabulan ee lagu arko inteeda kale ee biraha.
(Waxaa laga soo xigtey: Injineerka Naqshadeynta / Jaamacadda Wisconsin-Madison / Sam Milyan Weaver / Dib-u-abuur)
Kooxda ayaa markii ugu horreysay ka ogaatay hantidan iyadoo la adeegsanayo qalabka kombiyuutarka oo ay ku caddeeyeen tijaabooyin, iyagoo xusay inay xitaa xirmooyinka amorphous u oggolaadeen in birta ay leexato. Hadda tallaabada xigta waxay noqon doontaa in lagu aqoonsado biraha kale iyo agab kale oo leh dabeecad isku mid ah, iyo sidoo kale u adeegsiga qaab si loogu maareeyo ductility iyo xoogga ee bir. Cilmi baarista, iyadoo jidka ag fadhida, waxaa maalgeliyey Ciidanka Mareykanka.